Iibka xagaaga wuxuu yimaadaa Dukaanka Play-ka SNK | Androidsis
Iibinta xagaaga ee SNK oo leh 11 fasal oo midkiiba yahay € 0,99
Taariikhahaasi badanaa waa oo ay adeegsadeen daraasadaha qaar si ay u bilaabaan iibka xagaaga ama iibka xagaaga taas oo aan ku iibsan karno ciyaaraha fiidiyowga qiimaha gorgortanka sida 11-kan classics ee SNK u leeyahay dadka isticmaala Android sida Boqorka Halgamayaasha taxanaha oo leh seddex cinwaan iyo laba isbaarood oo ka mid ah, sida Garou: Mark of the Wolves and Fatal Fury.
Cinwaano kale oo SNK ay iibinayaan € 0,99 waa Birta Isugeynta oo leh 4 ciyaar fiidiyoow ah. Dhamaan taxane ah ciyaaraha arcade oo aad dhab ahaantii ku ciyaartay meel uun qaybtooda mashiinada ciyaarta fiidiyowga. Laga soo bilaabo SNK waxaan horeyba u haysannay Samurai Shodown II iyo Beast Busters, oo ah nooc kale oo weyn, kii ugu horreeyay ee taga a toogasho taas oo aan ku qasbanaanayno inaan la dagaallano saaxiibkeen isla markaana ka takhalusno kooxaha cadowga.
1 Laga soo bilaabo SNK 11 cinwaan
1.1 SNK kow iyo tobanka cinwaan ee la bixiyo
Laga soo bilaabo SNK 11 cinwaan
SNK wuu jiray waana jiray mid ka mid ah magacyada waaweyn ee loogu talagalay ciyaaraha fiidiyowga ee arcade ee da 'kasta. Ku soo noqoshada 90-meeyadii waxay ahayd markii ay guuleysteen oo ay noo keeneen cinwaano aan maanta uga heli karno Play Store-ka for 0,99 in iibka xagaagan.
Shan cinwaan dagaal oo leh Boqorka Dagaalyahannada iyo labadeeda wareejin sida Garou: Calaamadda Yeyda iyo Fatal Fury. Tan dambe sifiican ayay u garanayaan dad badani maadaama ay tahay mid kale oo ka mid ah kuwa waa weyn ee ciyaaraha halkaas oo aad ku laadi doontid wax walba oo kugu soo dhaca.
Dhinaca kale waxaan helnay bir bir ah sida dhinac nolosha oo dhan wareegaya arcade Taasi waxay na hor dhigaysaa hub weyn oo aan ku socon doonno inaan ka takhalusno cadaw kasta oo aan noolayn nolosha midkoodna. Hadda waa waqtigii ugu habboonaa ee lagu heli lahaa dhammaan ururinta birta ee qalabkaaga Android tan iyo markii aan haysanno afar cinwaan oo keenaya dhammaan tayada taxanahan shaashadda boosteejadaada.
Labada kale ee lagu daro iibiyadan xagaaga ayaa ah kuwa horay looga soo sheegay Samurai Shodown inuu sii wado garaacista bidix iyo midig iyo Beast Busters oo ah toogte si ay u horfadhiyaan ciyaar fiidiyoow ah oo sifiican looga ciyaaro shirkadda marka loo eego kaligood. Laba nooc oo kale oo caan ah oo caan ah oo la yimaada kuleylkan si aan weli ugu baahan nahay inaan cabno biyo badan ka dib markii aan la kulannay ciyaaro waali ah.
Ciyaaraha fiidiyowga SNK qaarkood ee ayaa loo cusbooneysiiyay aaladaha moobaylka oo leh qaabab ciyaar oo kala duwan, noo oggolow inaan ku bilowno heerar horeba u horumarsanaa oo aan u soo bandhigno habka cayaartooyda badan iyadoo loo marayo Bluetooth, sidaa darteed iyagu waa cudurdaarka ugu fiican ee ciyaar wanaagsan lala yeesho saaxiib.
SNK kow iyo tobanka cinwaan ee la bixiyo
Boqorka Halgamayaasha '97 (Android)
Boqorka Halgamayaasha '98 ( Android)
Boqorka Halgamayaasha 2012 (Android) / Nooca bilaashka ah (Android)
Khaas ah Fury Cadho (Android)
Garou: Calaamadaha Wolves (Android)
Samurai Shodown 2 (Android)
Birta xoqan (Android)
Birta Slug 2 (Android)
Birta Slug X (Android)
Birta Slug 3 (Android)
Xayawaanka Busters (Android) / Nooca Bilaashka ah (Android)
Waxaan idhi, munaasabada ugu fiican ee arcade iyo ciyaaraha dagaalka ee leh hawo dib u habeyn leh imisa ayaa la siinayaa Play Store iyo Android sanadihii la soo dhaafay. Haddii sabab kasta ha noqotee aadan isku dayi karin mid ka mid ah kow iyo tobanka cinwaan ee SNK, ha moogaanin ballanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Iibinta xagaaga ee SNK oo leh 11 fasal oo midkiiba yahay € 0,99
Qufulka ogeysii shaashadda la'aan Waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Alarm Gentle, awoodda ka dambeysa barnaamijkan saacadda alaarmiga